Tesla wuxuu koronto dib ugu celiyey isbitaalka caruurta ee Puerto Rico | Cusbooneysiinta Cagaaran
Nasiib darrose, in ka badan hal bil ayaa laga joogaa markii ay dhacday duufaantii Maria, ee burburisay Puerto RicoXaqiiqdii, waxay ka tagtay ku dhowaad dhammaan dhulka oo dhan in la gooyo oo koronto la'aan.
Elon Musk wuxuu sheegay inuu doonayo inuu caawiyo jasiiradda dib u dhis shabakadaada korontada, wax aan arki doonno. Waqtigaan la joogo, Tesla wuxuu bilaabayaa inuu oofiyo eraygiisa wuxuuna horey ugu rakibay isbitaal nidaam tamarta qoraxda ku shaqeeya.
Shirkadda Tesla waxay ku rakibtay shabakad ka kooban solar iyo baytariyada Powerwall isbitaalka carruurta ee magaalada San Juan. Intaas waxaa sii dheer, Musk shaqsiyan wuu leeyahay ugu deeqay $ 250.000 si loogu caawiyo muwaadiniinta Puerto Rico.
Nidaamka waxaa lagu dhisay waqti rikoor ah. Waxay qaadatay ku dhowaad toddobaad in la rakibo dhammaan darbiyada iyo baytariyada, sida laga soo xigtay faallo ka bixiyay mid ka mid ah xubnaha guddiga maamulka isbitaalka.
Shirkadda ayaa sheegtay in nidaamka ka jira isbitaalka carruurta uu yahay kii ugu horreeyay ee dhowr mashruuc oo la mid ah. Dowladda Puerto Rico waxay aad ugu mahadcelisay Elon Musk caawinta dadka rayidka ah.
Sida laga soo xigtay Guddoomiyaha Rossello:
“Waxaan u mahadcelinayaa Tesla oo doortey boggan maxaa yeelay carruur badan oo nugul ayaa ku tiirsan. Tamar la'aan, qaar badan ma awoodi doonaan inay helaan daaweyntooda. "
Ku rakibida shabakada qoraxda Tesla ee Isbitaalka Carruurta ayaa timid maalmo kadib markii gudoomiyihii hore ee Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dhaji qoraal taas oo ay ku muujisay xaaladaha ay ku sugan yihiin ka qaybgalka bukaannada in badan oo Puerto Rico ah. Sawirka faafay waxaan ku arki karnaa dhakhaatiir ku shaqeysanaya toosh casri ah oo casriga ah si ay u arkaan.
Waqtigan xaadirka ah, hal bil kadib marinka duufaanta Maria, in ka badan 2,5 milyan oo qof oo ku nool Puerto Rico (oo ka mid ah 3,4 milyan ee ku nool jasiiradda) ayaa weli koronto la'aan iyo isgaarsiin la'aan.
1 Gogole iyo AT&T
2 Mashaariicda kale ee Tesla (Powerwall)
Gogole iyo AT&T
Shirkadaha kale sida Google ama AT&T ayaa iyaguna ka shaqeynaya soo celinta isku xirnaanta korontada iyo gaar ahaan internetka mobilada ee jasiiradda.
Xaqiiqdii, Alphabet waxay iskaashi la sameysay AT&T si ay uga caawiso isku xirnaanta muwaadiniinta, iyadoo la adeegsanayo buufinta hawo kulul ee loo yaqaan "Project Loon" (oo ay soo saartay qeybteeda shirkadda X) iyo shabakadda LTE ee telefoonka taleefanka. Waqtigaan la joogo, buufinnadii ugu horreysay waxay ka duuleen xaruntooda bilowga, ee gobolka Nevada.
Buufin Mashruuca LoonSida laga soo xigtay shirkadda, waxay dabooli karaan ilaa 5.000 oo kilomitir oo dhul ah. Dhinaceeda, AT&T waxay xaqiijineysaa inay mar hore ku guuleysteen inay soo celiyaan helitaanka internetka 60% dadka ku nool Puerto Rico, laakiin wali waxaa jira shaqo in la sameeyo. Helitaanka internetka ka sokow, dadaal badan ayaa weli loo baahan yahay si loo xalliyo dhibaatooyinka iyo guuldarrooyinka shabakadda korantada ee jasiiradda, gaar ahaan si looga hortago in wax sidan oo kale ah aysan mar kale dhicin.
Mashaariicda kale ee Tesla (Powerwall)
Awoodda Korantada waa baytariyada shirkadda Tamarta Tamarta, oo ah shirkad Mareykan ah oo laga leeyahay Tesla Motors. Batariyada Powerwall-ka waa lagu soo celin karaa guriga isticmaalkiisa iyo warshadaha yar yar. PQalabyada waaweyn Tesla ayaa bixisa Powerpack taas oo aan la cayimin karin si loo gaadho awoodaha GWh
Sawirka asalka ah ee Hyperloop wuxuu ahaa fikrad si guud loo shaaciyay iyada oo la adeegsanayo dukumiinti naqshad hordhac ah bishii Ogosto 2013, oo ay kujirto marin aragtiyeed oo loo maro Los Angeles ilaa aagga San Francisco Bay, inta badan socdaalkeedu wuxuu barbar socdaa Interstate 5. Falanqaynta hordhaca ah waxay muujisay in waqtiga la qiyaasay ee marinka noocaas ah uu noqon karo Daqiiqado 35, taasoo la micno ah in rakaabku ay mari doonaan wadada 560-kilomitir xawaare celcelis ahaan ku dhow 970 km / saacaddii, oo xawaareheedu ugu sarreeyo yahay 1.200 km / saacaddii.
Waxay soo saartay gantaalaha Falcon 1 iyo Falcon 9, kuwaas oo ahaa lagu dhisay hadafka ah in la isticmaalo gawaarida hawada sare loo adeegsado. SpaceX ayaa sidoo kale soo saartay dayax gacmeedka loo yaqaan 'Dragon spacecraft', kaas oo ay hawada sare u rogeen gantaalaha Falcon 9. Snaqshadaha paceX, tijaabiya oo soosaara inta badan qaybaha guriga gudihiisa, oo ay ku jiraan matoorada Merlin, Kestrel iyo Draco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tesla wuxuu koronto dib ugu celiyey isbitaalka caruurta ee Puerto Rico